TRUCK SIDE MIRROR REARWIR MIRROR PK9512 AUTO EXTERIOR MIRROR ụzọ MIRROR MAKA TOYOTA HIACE. Lelee ọnọdụ okporo ụzọ site n'ọtụtụ akụkụ ma chụpụ n'enweghị nsogbu. Iji mezuo ebumnuche a, anyị eguzobewo njikwa njikwa, nyocha, njikwa kacha mma na usoro nnweta dị mma.
PK9592 adabara Hino dutro, Toyota na ọtụtụ eluigwe na ala .Mirror iko n'elu technology bụ chrome plated, nke nwere ike n'ụzọ dị irè igbochi ntigbaa ma mee ka onye na-akwọ obi ala. 100% Brand ọhụrụ na elu quality.Our soplaya ga-ISO9001 ruru eru. ndị TS16949 ruru eru na-emepụta.
Igwe ntụgharị anyị bụ otu n'ime akụkụ nchekwa dị mkpa nke ahụ ụgbọ ahụ. Ogo PK9810 dị elu bụ enyo ụgbọ ala maka Hino & Isuzu FTR.SWB nwere akụkụ nke akụrụngwa na-ekesa ya yana ịzụta, ahịa, ụlọ nkwakọba ihe na usoro nnweta zuru oke. Anyị jisiri ike karịa 200,000. ụdị ngwaahịa, yana gụnyere akụkụ niile nke ụgbọ ala China.
European traktọ Isi Parts gwongworo mirror PK9440 adabara Mercedes-Benz Actros MP4.Compet price.Our factory lekwasịrị anya Trọk Mirror na-eme nnyocha na-emepe emepe, gafere ISO9001 quality management usoro na na. Ka ọ dị ugbu a, anyị gafere Emark na DOT nke ọma.